मेरो गन्थन: केहि चोइटाहरु
पैसा कमाउने धुनमा छौं हामी
सबै जना धनी हुने भए
काम चैं कस्ले गर्ने हो कुन्नि ?
महङ्गीनलाई यसपालि बजेट भाषण कुर्नै परेन
बढेको भाउ कहिल्यै घटेन,
तर के गर्नु खान परेकै छ, लाउन परेकै छ ।
२० वर्ष पहिले भन्दा बजेट १० गुना बढेको छ
हामी कागज़को विकासमा मख्ख छौं
तर देशमा गरीबी घटेको तथ्याङ्क छ त ?
कमाएको धनको कर सबैले तिर्नु पर्छ
तर कर तिरेर नांगिने भए
गरीब हुन कसलाई पो मन छ र ?
सेवक घटेको होइन, समाज सेवा गर्ने धेरै छन्
तर हाम्रोमा माग्ने नै धेरै भएपछि
कस्ले नै पो सक्छ र भाग पुर्‍याउनलाई ।
Posted by बागी at 4:30 PM
Anonymous March 20, 2010 at 1:42 AM
दूर्जेय चेतना March 27, 2010 at 7:25 AM
चोईटाहरु चोटीला लागे है।